လမ်းပြကြယ်: အသျှင်ပညာစာရနဲ့ ရခိုင်ပြည်အပေါ် နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်သူတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးကြပါ
အသျှင်ပညာစာရနဲ့ ရခိုင်ပြည်အပေါ် နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်သူတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးကြပါ
ရခိုင်ယိုဉ်ကျေးမှု သမိုင်းဝင် အမွီအနှစ်တိကို ဖျက်ဆီးမှု၊
ရခိုင်လူမျိုး အချေတိကို ရာနန့်ချီပနာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူမျိုးပြောင်းမှု၊
အသျှင်ပညာစာရဖမ်းဆီးမှု လုပ်ရပ်တိကို ဆန့်ကျင်ရေ
ရခိုင်လူမျိုးတည်တံ့ရေးနန့် လူမျိုးမပျောက်ရေးကို လိုလားရေ
ရခိုင်ရို့၏ အသက်သွီးကြောဖြစ်တေ- ရခိုင် ယိုဉ်ကျေးမှု
သမိုင်းအမွီအနှစ်တိကို နှလုံးသွီးပိုင် ချစ်မြတ်နိုးရေ
(ရခိုင်ပြည်တွင်း၊ ရခိုင်ပြည်ပနန့် နိုင်ငံတကာကို ရောက်ဟိနိန်ကတ်တေ)
အောက်ပါ petition site ကို ၀င်ရောက်ပနာ လက်မှတ်ရွီးထိုးပနာ
လူမျိုးကြီးဝါဒီ နအဖ စစ်အာဏာရှင်ရို့၏ မတရားသော လုပ်ရပ်တိကို ဆန့်ကျင်ပီးကတ်ဖို့
World Arakanese Community ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရေ။
(ဒေအီးမေးလ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက် ဖြန့်ဝီလားဖို့လေ့ ပန်ကြားအပ်ပါရေ)
်ဒေဆိုက်ကို ၀င်ပနာ လက်မှတ်ရွီးထိုးကတ်ပါ/ ဤဆိုက်ကို ၀င်ရောက်ပြီး
Please sign your petition via the following link.
နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ပြုမူနေတဲ့ မတရားသော
လုပ်ရပ်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတိုင်း
အနေနဲ့လဲ အထက်ပါ petition site ကို ခဏတာလောက် ၀င်ရောက်ပြီးတော့
လက်မှတ်ရေးထိုးကာ နအဖရဲ့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု
သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်တွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ လုပ်ရပ်၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာက
လက်မခံတော့တဲ့- လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ အုပ်စုတစ်စုကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်
ပြောင်းရွှေ့မှုလုပ်ရပ် တွေကို ဆန့်ကျင်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
(ဒီအီးမေးလ်ကို တတ်နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြဖို့လဲ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်)
(ဆရာတော် အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်- http://rammawaddy.blogspot.com)
Free Ashun Pinnyasara (Burmese pronounciation: Ashin Pyinnyasara)
World Arakanese Community has created Online Petition for
Ven.Pinnasara who was arrested by Burmese Military Government also
known as State Peace and Development Councial (SPDC) on Tueday, July
Ashun Pinnyasara, 57, is one of the famous Monks of Arakan and he is
highly esteemed by Arakanese people due to his good morality and
selflessness. As antiquarian and historian, he collectedalot of
valuable curios and palm leaf inscriptions which are all Arakanese
ancient materials as evidences and documents. And he was taking care
120 children, whose parents are lost, in his monastery like orphanage.
Burmese military personals occupied his Buddhist monastery, all
ancient materials of his properties which are belonging to Arakanese
National and 90 of his orphans were sent to Mandalay and Maguey far
away from their native place of Arakan by Burmese Army. He is sued by
unacceptable Seven Cases of lawsuit by Burmese authorities who have
createdalot of issues among the Burmese and Arakanese. He recently
transferred from Police Station I to Akyab jail and he was faced two
times had summoned for jury to the court of Akyab.
As the expression of World Arakanese Community concern to be released
of Ven. Pinnyasara, and they have created and published web email
signature campaign globally and all Arakanese and all people from
Burma should be united to show the signature as this is one of causes
of our concern under the unlawful rule of SPDC.
(We kindly request you to fwd this email as much as you can)